माघ २३ गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन प्याब्सनको माग – Ramailo Sandesh
निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल (प्याब्सन)ले माघ २३ गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन माग गरेको छ । प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर कोरोना महामारीको परिस्थिति हेरेर माघ २३ गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन माग गरेको हो ।
खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई आलो पालो प्रणालीमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न शिक्षामन्त्री पौडेललाई माग गरेको अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताए ।
उनले भने, ‘सबै कुरा भइरहेको छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा डेडलक छ । अब हामीले के गर्ने त ? १५ गतेसम्म बन्द भनेको छ । केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयले २० गतेसम्म खोप अभियान चलाउने भनेको छ । ठीक छ । २० गतेपछि हामीले के गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालयको सोच के छ भनेर सोध्यौं ।’
त्यसैले खोप लगाएका बालबालिकाको लागि विद्यालय खोल्नुपर्ने माग गरेको उनको जिकिर छ । थापाले भने ‘अनलाइन कक्षाका नाममा गेम र च्याटमा व्यस्त हुँदा बालबालिका मनोसामाजिक, मनोसांस्कृतिक हिसाबले बिचलन आउन सक्ने जोखिममा भएकाले निर्वाध रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपाउनुपर्ने लगायतका १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।’
खोप लगाइसकेको विद्यार्थीलाई आलो पालो प्रणालीमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नको माग गरिएको उनको भनाइ छ । आउने सप्‍ताह १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका सबै विद्यार्थीलाई खोप दिनुपर्ने र पाँच वर्षदेखि ११ वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि पनि खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको पुरीले बताए । यस्तै शिक्षक तथा कर्मचारीको लागि बुस्टर डोजको व्यवस्था गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको पुरीले जनाकारी दिए ।
उनका अनुसार प्याब्सनको काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्ला समिति तथा नगरसमितिहरु गरी १८ वटा कार्यसमितिले तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पालिकाहरुमा भने भोलि ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।